Ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ nke Budapest Airport na-aga n'ihu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ nke Budapest Airport na-aga n'ihu
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Hungary na -agbasa akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Egwuregwu • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
The kwa afọ ọrụ ebere agbụrụ 'Runway Run', haziri na Ọdụ ụgbọ elu Budapestszọ ụgbọ elu, a ga-enwe oge nke asatọ n'afọ a. Runway A ga-emechi m maka oge ihe omume ebe ndị ọrụ ụgbọelu, ndị egwuregwu, na ndị nnọchi anya mpaghara ndị njem ga-esonye, ​​n'ịkwado ezigbo ihe kpatara ụgwọ ntinye niile enyere SUHANJ! Ntọala na Anthony Nolan Foundation.
The Covid-19 ọrịa na-efe efe enweela mmetụta siri ike na ụlọ ọrụ niile, yana ụgbọ elu na-ada ike nke ukwuu, mana Ọdụ ụgbọ elu Budapest lere ya anya dị oke mkpa iji nọgide na-akwado ọrụ ebere ọbụlagodi n'oge a siri ike site na ịchekwa ọdịnala nke ọsọ ọsọ ọ na-agba kwa afọ, Runway Run. Gbanwezi ọnọdụ ịgba ọsọ ahụ iji mezuo iwu ma hụ na aro dị adị, ọdụ ụgbọ elu Budapest ekpebiela ịhapụ ịhapụ ndị ọgba ọsọ na-esonye na agbụrụ ahụ kwa afọ ma ọ bụ ntọala ndị metụtara ya. Ntinye ego anakọtara n'ọsọ ịgba akwụkwọ ịkpọ oku na-enye onyinye kwa afọ site n'aka onye na-ahụ maka ọdụ ụgbọ elu na SUHANJ Hungary! Ntọala, na-akwado ọrụ egwuregwu nke ndị nwere nkwarụ, yana ntọala British Anthony Nolan, na-akwado ọgwụgwọ ọrịa leukemia.
A ga-eme Runway nke afọ a na Satọde, 19 Septemba 2020, oge nke asatọ ọnụ ụzọ Runway nke Hungary m ga-anabata ndị ọgba ọsọ kama ụgbọ elu maka ọkara ụbọchị. Ndị sonyere gụnyere ndị nnọchi anya mpaghara ụgbọelu, ndị otu nnukwu ụlọ ọrụ, na ndị egwuregwu nke SUHANJ! Ntọala, yana mmadụ ole na ole nwere ihu ọma nwere ike imeri ohere isonye na ọsọ ahụ site na asọmpi nrite nke ọdụ ụgbọ elu kwupụtara.
Dr. Rolf Schnitzler, onye isi oche, Budapest Airport gosipụtara: “Runway Run bụ ihe omume dị mkpa na ndụ nke ọdụ ụgbọ elu kwa afọ. N'afọ a ọ bụ ọbụna pụrụ iche dị ka ọnwa ndị a siri ike chọrọ ka anyị jikọta ọnụ karịa mgbe ọ bụla. Ọdụ ụgbọ elu Budapest, dị ka ụlọ ọrụ nwere ọrụ, chere na ọ dị mkpa ịkwado ụlọ ọrụ ndị dị ka SUHANJ !, ekele anyị na-ekere òkè na ọ joyụ nke ịme egwuregwu ọnụ ọtụtụ afọ, yana ntọala Anthony Nolan nke UK na-akwado ịgwọ ụmụaka leukemia. Anyị niile dị ike karịa. ”
Na mgbakwunye na ndị okenye, Runway Run na-enyekwa ohere maka ụmụaka ịgba ọsọ na gburugburu ebe pụrụ iche - ebe ndị okenye nwere nhọrọ n'etiti 5k ma ọ bụ 10k, ụmụaka (n'etiti afọ isii na 15) nwere ike ịbanye na ọsọ 1.5k na Runway I.